I Sneaky CPA uphondo 2.0 - Indlela Dala Simple Elitholakele Ngempumelelo - Uphondo Of The Day
I Sneaky CPA uphondo 2.0 – Indlela Dala Simple Elitholakele Ngempumelelo
Sawubona Jesisco lapha,
Big Disclaimer : Imiphumela aziyona into evamile. Angikho ezithembisa uzothola imiphumela efanayo. Ungase ube ngaphansi, ayikho noma ngaphezulu. Kuyinto konke kukuwe.
Ngiyabonga kakhulu ngentshisekelo yakho kuhlelo Sneaky Elitholakele okufushane CPA 2.0. Ngibeke omningi kuleli ukukubonisa ngokuningiliziwe ngangokunokwenzeka izinyathelo eziqondile ngathatha ekutheni alikho icebo lokuba sucessful njengoba lobulungu CPA esikhathini esingaphansi 21 izinsuku.
Ngakha uphondo kwenu okuphelele, ungase uyilande mahhala ekupheleni noma uma uthanda ungase ufunde ukwakha ngokwakho. Ngenza kungenzeka ekhasini elilandelayo nge step by step imfundo mahhala.
Kodwa izinto zokuqala kuqala…
Yini CPA Marketing
CPA Marketing Nenkokhiso yokufuna ngayinye (CPA), obeye aziwe njengo “Izindleko isinyathelo ngasinye” noma ukhokhe yokufuna ngayinye (PPA) futhi izindleko ukuguqulwa ngamunye, iyi-online ukukhangisa zamanani imodeli lapho umkhangisi okhokhela i yokufuna esibekiwe – isibonelo ukuthengiswa, ngokuchofoza, noma indlela ukuhambisa (isb, isicelo contact, newsletter ubhalisele, ukubhaliswa njll).
Uhola ikhomishini noma imali for ekugqugquzeleni CPA izipesheli noma izinhlelo zokusebenza.
Promotion kungenziwa ngokusebenzisa :
 Ikhasi lewebhu
 umkhankaso imeyili
 Ukucinga (izinjini)
 ezokuxhum ...
Kungakhathaliseki indlela ezokhulumela…
Awudingi ukudala umkhiqizo wakho siqu futhi ukubhekana ukwesekwa iklayenti njengoba marketer CPA. Futhi uma nenza okulungile kungaba inzuzo enkulu njengoba imodeli yebhizinisi.
Yini okudingeka aphumelele kuyinto : ulwazi + isinyathelo
Uzoba owokuqala lapha (ulwazi). Ukuthatha isinyathelo kungokwakho. Uma ungenalo isinyathelo ngeke ubone lutho. Uxolo ukusho ukuthi. Kodwa i wayefuna ukwenza kucace kakhulu ngawe.
The Best CPA amanethiwekhi
Abanye okunikezwayo noma izinhlelo zokusebenza kungaletha kuwe phakathi $0.1 ukuze $15 ngayinye igcwaliswe isenzo. Futhi lapho babengase batholakale khona phezu ethandwa kakhulu-CPA amanethiwekhi. Futhi ngokuphelele free ukuze ujoyine. Ngingathanda iseluleko ukukhetha omunye futhi unamathele kuso njengoba newbie.
The Best CPA uphondo
Ake ucabange lokhu – Sachitha $20 ukuze uthole traffic (100 clics okubhekiswe) ukukhuthaza CPA sipho okhokhela $ 2 / isenzo kuphelile.
Ngokuvamile lapha yindlela abantu ukukhuthaza CPA izipesheli : Bashayela lomthamo ekhasini yabo lokubikezela (ikhasi khama / ikhasi presell / isayithi ...) futhi ngokushesha nje nethemba ujoyine uhlu lwabo lwamakheli, ukuthi kabusha CPA sipho. Le ndlela imisebenzi. Kodwa kungcono kancane inzuzo kuka yami «sneaky cpa uphondo» eyodwa.
Nazi imiphumela ejwayelekile kusukela 100 ukuchofoza
sifika 40 optins
Ukuze 37% lokuguqulwa sifika 15 izenzo eziqediwe.
Yilokho $30 njengoba ngenzuzo
$10 Inzuzo. Sesiku inzuzo.
Kwesinye isikhathi abantu kumthamo ngqo sipho bese ngokuvamile zingaphansi kwamamitha- 10% lokuguqulwa.
Nazi imiphumela ejwayelekile futhi kusukela 100 ukuchofoza
10 izenzo eziqediwe
Yilokho $20 njengoba ngenzuzo
$0 akukho ukulahleka ezingenambuyiselo. Asifanele kwezamabhizinisi.
Sneaky CPA uphondo – Indlela entsha iphahlazeke CPA ikhomishini
Udinga «sneaky cpa uphondo» esikhundleni ngaphambi ukushayela draffic.
Yini «sneaky cpa uphondo» ?
Kuyinto uphondo eyakhelwe amaningi cpa izipesheli evumela ukuba kabili noma kathathu yakho «inzuzo» kusuka traffic efanayo. Kucishe kukusiza ukuba wenze ikhomishini MAHHALA.
(nesinqindi: abanye aqukethe lobulungu links)
Uzodinga amathuluzi ezilandelayo ukuze usethe sneaky cpa uphondo lwakho :
 Indawo (igama lesizinda) kanye / noma clickfunnel
 3 ukuze 4 cpa izipesheli (Nxusa izipesheli ukusebenza kakhulu)
Inqubo – Ifilosofi ka Sneaky CPA uphondo
Sishisekela okubhekiswe yethu 100 clics ekhasini lokubikezela. Chofoza wokuqala kuholela izipesheli. Esokuqala sipho cpa ($2 uma igcwaliswe) kanti owesibili ikhasi lethu optin.
Futhi uma sigcina izibalo efanayo, nakhu sinalo njengehange umphumela :
Kusukela 100 clics sifika 40 optins.
Njalo imikhondo optin uqondiswe ikhasi isiqinisekiso lapho Chofoza ezophindaphindwa ngo 2 futhi. Eyokuqala i-nye ithuba cpa ($2 uma igcwaliswe) kanti eyesibili eya siyabonga ikhasi.
Sine 2 Cpa inikeza kulelo khasi ukuze igcwaliswe. $2/isinyathelo.
Cishe singase senze $2+$2+(2*$2)= $ 8 / ukuhola
Yilokho phezu $320 ngoba bonke labo 40 optins. Hhayi ukusho ukuthi kusadingeka angase angakhuthazi izipesheli thorugh a 5 day email series. inzuzo $300 futhi sakha uhlu lwethu MAHHALA.
Yilokho sikubiza «sneaky cpa uphondo». Lokho uphondo kuyasiza ibhange $ 6-8 $ / phambili kusuka $2 cpa sipho. I wenkokhelo ephakeme ngcono.
Uma uya ukudala lolu hlobo uphondo, ungazise uma udinga usizo noma eminye imininingwane .... Noma vele uvakashele isinyathelo sami ngesinyathelo isifundo lapha.
Ngaphambi kokuya, lapha kwenziwa yakho ngawe uphondo, uma ungenayo isikhathi ukwakha owakho. Ngixoxa ngokusebenzisa clickfunnels ngakho udinga i-akhawunti abo ukuze uyilande. Chofoza lapha ukudala eyakho futhi uchofoze lapha ukuze ulande sneaky cpa uphondo lwakho.
Manje yini elandelayo? Thatha isinyathelo futhi uqale traffic uphondo lwakho. Vele.
Ukuze uthole ukusekelwa okuthe xaxa, ungathumela i-imeyili nathi nganoma [email protected]
Ngikufisela konke okuhle
-, Kwasuka kweThimba usuku